Kugadzirisa mukati memazuva ano zvivako zvemazuva ano Interior design apartments Bukarest Constanta - Nobili Interior design, studio, architect, designer, companies, design, prices
Mazuva ano mukati mekugadzira zvivako - Kugadzira classic style apartments
Muchikwata chemahofisi chakasarudzwa zvakanakisisa mukati mekugadzirwa kwemapurisa emakamuri akaitwa neNobili Interior Design. Pakushandisa mapurani ekugadzira, vavakadzi vedu vakanyatsoongorora pfungwa nemanzwiro anotsanangurwa nemutengi. Izvi zvinotevera mapurani ekugadzira ibhizinesi rebhizimisi redu, iro rinomiririra isu kudarika chero zvinyorwa zvakanyorwa uye mazwi.
Inyanzvi yekugadzira imba 3 Constanta makamuri
Gara remukati yekupinda mukati mekugadzira
Injiro yekugadzirisa nzvimbo yokugara
Indaneti yekugadzirisa kurarama imba yakakura
Mukati Mukati 4 mukati mekugadzira makamuri emazuva ano
Inyanzvi yekugadzira imba 4 makamuri
Imba yemukati yekamuri yekamuri 3 room
Kana mufurati, zvakakosha kufunga magadzirirwe zvose nzvimbo kuti vawane kunonyanyisa kunyaradzwa nenzvimbo zviduku munharaunda. Mukuwedzera, mukati mekamuri rinofanira kunge rakabatana uye panguva imwechete rinoshanda uye rakanaka. Nokuda kweizvi chinangwa chekugadzirwa kwemukati kwekamuri 3 kana 3 kuchazadzika. Unogona kuona mukati design zvirongwa zvinoitwa kambani yedu Apartments chaiwo, manyorerwo ano muna Constanta, muBucharest, Brasov, Ploiesti. Iko pfungwa yekugadzirwa kwemukati yeimba inogona kugadzirwa nevakagadziri vose uye vashandi vekugadzira midzi. The chikuru chaikosha ndechokuti haana kuona duku mashoko musiyano pakati rakabudirira mukati magadzirirwo chirongwa uye svikiro. Iko mukati mekugadzirwa kwemuzinda weimba inoenderana nehukuru hwehukuru nekuwanika kwenzvimbo yekugara. Dzimba mbiri kana matatu muimba yekuvako dzine mapurogiramu akasiyana zvachose. Sezvo mutemo, imba yacho yakashongedzwa mumirara yakajeka ichioneka ichiendesa mberi kwekamuri. Kuvapo kwemakamuri maviri eimba muimba yacho kunobvumira sangano rakanyatsonaka kune nzvimbo dzinoshanda. Kazhinji kamuri inogoverwa kuimba yekurara uye yega yega yekurara. Nenzira, imba yekurarama inogona kubatanidzwa nehofisi nokuti haibati nzvimbo yakawanda. Vatengi vezvitatu zvemahombekombe matombo vane lucky zvikuru, nokuti vanogona kutora chero pfungwa ipi neipi yekugadzirwa kwemukati. The nzvimbo mupenyu unokubvumira kuronga wako mufurati pamwe fenicha, nenhumbi uye nezvimwe zvinhu mukati, apo pamusoro aida manyorero pfungwa. Imba imwe neimwe inogona kugadzirwa nenzira yakasiyana kana tinogona kuronga imba yacho nenzira imwe chete. Muzvikamu zvitatu mumakamuri mukirasi yeklasi, mahofisi acho akaoma, asi dambudziko iri rinogona kubviswa kuburikidza nekushandisa zvinhu kupedza uye zvakakodzera kukoronga zvinhu. Indifernet kuti une mufurati Galati, Braila, Tulcea kana Bacau, Suceava, Iasi, Buzau vane pfungwa uye mazano anoshanda chero manyorero zvakagadzirwa vakabvumirana ne nemhosva. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pehupenyu hwemukati hwekugadzira mazano nemutengo fadza shanyo yeChitsuwa Chebasa mukati mukati mekuita mutengo .